Nagarik Shukrabar - मिस्टर भर्जिन: यौन मनोविज्ञानको भद्दा मजाक
मिस्टर भर्जिन: यौन मनोविज्ञानको भद्दा मजाक
बिहिबार, ०७ भदौ २०७५, १२ : २२ | अनिल यादव
स्वर्गद्वार जाने होइन त ? फिल्म रिलिज अघिसम्म ‘मिस्टर भर्जिन’ को बजारमा यस्तै नारा सुनियो । फिल्मको ट्रेलरमै अनुरोध गरिएको थियो, ‘स्वर्गद्वार जाने मिति भदौ १ गते, हेर्न नबिर्सिनुहोला ।’
अनुरोधलाई स्वीकार्दै भदौ १ मै हल पुगेँ । फिल्म हेरिसकेपछि निष्कर्ष निकालेँ– स्वर्गद्वार त भ्रम मात्रै रहेछ, फिल्मले लैजाने त भद्दा चुट्किला र द्विअर्थी संवादको टोल पो रहेछ !
यस फिल्मलाई निर्देशक विशारद बस्नेतले नेपालकै पहिलो सेक्स कमेडी फिल्मका रुपमा प्रचार गरेका थिए । सेक्स कमेडीमा आधारित फिल्म यसअघि पनि बनेका थिए । बरु डबल मिनिङ जोक्स र डायलगको प्रयोगमा भने यसले यस अगाडिका ‘सेक्स कमेडी’ फिल्मलाई माथ खुवाएको छ ।
फिल्मका केही डायलग यस्ता छन्ः
–हामीले हाम्रो बन्दुक पड्काउनैै पाएका छैनौं ।
–बाँझो खेतलाई खेतीपाति गर्दाको मज्जा के थाहा हुन्छ र !
–यो केटी को हो ? बारुद हो, बन्दुकमा लोड गर्न हिँडेको ।
–थाक्नुमा के मज्जा छ र हजुुर ? जति मज्जा थकाउनुमा छ ।
युवती र यौनलाई इंगित गर्ने यस्ता द्विअर्थी संवाद फिल्मभरि छन् ।
उमेरले तीसको मध्यतिर हिँडिरहेका तीन कुमार युवाको कथा हो ‘मिस्टर भर्जिन’ । एक छ ढालबहादुर (गौरव पहाडी) जो ढाल किन्न र बेच्न लजाउँछ । अर्को छ, कुमार कान्छा (कमलमणि नेपाल) जो साँच्चिकै कुमार छ । अनि अर्को छ, पवित्रे (विजय बराल) जसका लागि सेक्स महाभारतको युद्ध जित्नुसरह छ । तीनैजना बिहे गर्न चाहन्छन् तर बिहेअघि नै यौन अनुभव बटुल्न पनि लालायित छन् ।
एक दिन तीनैजनाले आफ्नो ‘भर्जिनिटी’ तोड्ने निर्णय गर्दै युवतीको खोजीमा लाग्छन्, ठमेल । ठमेलमा भेटिन्छन्, ट्याक्सी ड्राइभर प्यासी मोहन (रवीन्द्र झा) । उनको काम ट्याक्सी चलाउने मात्रै होइन, यौन प्यासीहरुको प्यास मेटाउने पनि हो । अनि सुरु हुन्छ प्यास मेटाउने यात्रा । तर ती तीन युवाको प्यास मेटिन्छ त ? उनीहरुको भर्जिनिटी ब्रेक हुन्छ ? यही प्रश्न वरपर फिल्म घुमेको छ ।
खासगरी यो एक दिनको कथा हो । नेपाली फिल्ममा यो कन्सेप्ट ताजा पनि हो तर पर्दामा यसलाई कसिलो र कलात्मक रुपमा उतार्न निर्देशक बस्नेत भने पूरै चुकेका छन् ।
उनले बनाउन त फिल्म नै बनाएका हुन् तर दर्शकलाई यो लामो चुट्किलाको शृंखलाभन्दा बढी लाग्दैन । दर्शक त हाँस्छन् तर फिल्म हेरेर होइन, पात्रहरुको संवाद र चुट्किला सुनेर । हलका दर्शक रिदमिक हाँसोमा होइन कोलाहलको हाँसो हाँस्छन् । त्यसैले कल्पना गर्नुस् न, फिल्म कस्तो बनेको होला !
फिल्म कला र दृश्यभाषाको बलियो माध्यम हो भन्ने जानकारी विदेशमा फिल्म मेकिङ पढेर आएका निर्देशक बस्नेतलाई नहुने विषय हैन तर विडम्बना फिल्ममा भने उनको यो ज्ञानको प्रभाव देखिएन ।
फिल्मभर त्यस्तो कुनै बलियो दृश्य भेटिएन, जसले दर्शकको मन छोओस् । फिल्मलाई यौन मनोविज्ञानमा आधारित त भनियो तर फिल्मका कुनै पात्रको चरित्रमा मनोविज्ञान भने झल्कदैन । पात्रको यौन उत्सुकता र उत्कट चाह दृश्यले भन्दा बढी संवादले दर्शाउँछ ।
दृष्यांकनमा निर्देशकको कलात्मकता र कल्पनाशीलताको ठूलो अभाव खड्कन्छ । मनोविज्ञानको बहानामा द्विअर्थी संवादले बुनिएको स्क्रिप्टका भरमा पूरा दुई घण्टा दर्शकलाई अड्याउने भुल गरेका छन्, उनले । यो नै उनको ठूलो कमजोरी देखियो ।
हलिउड र बलिउडमा यौन मनोविज्ञानमा आधारित निक्कै बलिया फिल्महरु बनेका छन् । नेपालमा पनि यसको खडेरी छैन । उनले फिल्म बनाउनु अगाडि जोयेश पाण्डेकै ‘साँघुरो’ हेरेको भए चाल पाउँथे, यौन मनोविज्ञान झल्काउने कला ।
यौनलाई विषय बनाउँदा महिलालाई मनोरञ्जनको रुपमा देखाउनु अन्य फिल्म उद्योगको पनि समस्या हो । यो फिल्म पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । बरु यही समस्याबाट फिल्म ग्रस्त छ । फिल्मभर महिलालाई यौन प्यास मेटाउने वस्तुबाहेक अरू केही ठानिएको छैन ।
कहिले पोइल गा’को कुरा गरिएको छ, कहिले श्रीमान् विदेशमा हुँदा यता अर्कैसँग सल्केको । महिलाको चरित्र चित्रण कतिसम्म कमजोर र त्रुटिपूर्ण लाग्छ भने फिल्मभित्र महिला इन्स्पेक्टर मोहिनी देवी (सिर्जना सुब्बा) लाई पुरुष प्रहरी हल्दारलेसमेत द्विअर्थीको संवाद बोल्दै जिस्काउँछन् । तेस्रो लिङ्गी पात्रको भूमिका दर्शक हँसाउने प्रयासमा सीमित छ ।
यौनको खोजीमा ठमेल पस्दा युवाहरु ठगिने समस्या नयाँ होइन । फिल्मले यसलाई विषय बनाउन खोज्नु प्रशंसनीय हो तर प्रस्तुतिलाई गहिराइमा पु¥याउन नसक्दा विषयवस्तु राम्रो हुँदाहुँदै पनि फिल्म झुर हुनबाट जोगिएन ।
पर्दामा पात्रहरु ठमेल त घुम्छन् तर दर्शकले खासै घुमेको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । पात्रहरु डान्सबार र दोहोरी साँझ त पस्छन् तर दर्शक अनुभव गर्न नपाउँदै फर्कन्छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले पैदल हिँडिरहेकालाई चेकजाँच गर्ने र घरसम्म पछ्याउने दृश्यले यो फिल्मका निर्देशकको हल्कापन पुष्टि गर्छ । ट्राफिक प्रहरीले पैदलयात्रीको हैन, सवारी चालकको जाँच गर्छन् । पैदलयात्रीको जाँच गर्ने काम जनपथ प्रहरीको हो । निर्देशकले ट्राफिक र जनपथ प्रहरीले गर्ने काम समेत चाल पाएनछन् ।
यत्ति हुँदाहुँदै पनि औषधि पसलमा कन्डम किन्न जाँदाको दृश्य भने सन्देशमूलक छ । हाम्रो समाजमा अस्थायी साधन कण्डम किन्नसमेत लजाउने बानी जतिसुकै पढेलेखेकाहरुमा पनि हट्न सकेको छैन ।
त्यसमा पनि महिला रहेको पसलमा गएर पुरुष ग्राहकले ‘कन्डम दिनु न’ भन्न अझै हिच्किचाउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई निर्देशकले फिल्ममा घतलाग्दो पाराले पस्केका छन् ।
‘मिस्टर भर्जिन’मा नेपाली रंगमञ्चबाट पर्दामा चम्किएका अभिनेता गौरव पहारी, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, भोलाराज सापकोटाहरुको अभिनय छ । निर्देशकले दिएको द्विअर्थी संवादलाई भने कलाकारले स्वाभाविक लयमा प्रस्तुत गरेका छन् । संवादको असहज प्रभावलाई भुल्ने हो भने सबैको अभिनय ठीकै लाग्छ । रवीन्द्र झालाई दर्शकले अलि बढी नोटिस्ड गर्छन् । यौनकर्मीका रूपमा मरिष्का पोखरेलको अभिनय स्वाभाविक देखिदैन । सिर्जना सुब्बालाई इन्स्पेक्टरको भूमिका सुहाएको छ ।
तर रंगमञ्चबाट आएका आशलाग्दा कलाकारलाई भद्दा मजाक र द्विअर्थी संवादमा रमाएको देख्दा उनीहरुको अभिनयबारे जानकार दर्शक निराश हुन्छन् । फिल्मको एक दृश्यमा विजय बराल भन्छन्, ‘आई एम् सो डिप्रेस्ड’ । फिल्म हेरिसकेपछि त्यो डायलग विजयको होइन, दर्शकको हुन्छ ।
ए मेरो हजुर–३ : बिर्सन योग्य फिल्म (फिल्म दृष्टि)
दर्शकलाई जबर्जस्ती हँसाउन द्विअर्थी र भद्दा संवाद, जबर्जस्ती रुवाउनलाई विरहको ध्वनि । अभिनेत्री झरना थापाको दोस्रो निर्देशकीय फिल्म ‘ए मेरो हजुर–३’ भित्र के छैन र ? गीत र फाइट त छुट्नै कुरै भएन । केही छुटेको छ भने त्यो हो– सिर्जनशीलता ।
स्टार हारेको वर्ष
०७५ मा करिब ९० हारहारी नेपाली सिनेमा हलमा रिलिज भए तर आधा दर्जन निर्माताले पनि आफ्नो यथार्थ आम्दानी खुलाउने हिम्मत गरेनन् । कारण प्रस्टै छ, निराशाजनक व्यापार ।
अब्बल अभिनेत्री स्वस्तिमा
समीक्षकहरुले ‘बुलबुल’को अभिनयलाई स्वस्तिमाको करिअरकै उत्कृष्ट अभिनयको रुपमा विश्लेषण गरे । उनले निर्वाह गरेको टेम्पो ड्राइभरको भूमिकाले उनलाई ०७५ को अब्बल अभिनेत्रीको सूचीमा पुर्यायो ।